Nnwom 27 NA-TWI - Ayeyi mpaebɔ - Awurade ne me hann ne - Bible Gateway
Nnwom 26Nnwom 28
Nnwom 27 Nkwa Asem (NA-TWI)
27 Awurade ne me hann ne me nkwagye; merensuro obiara. Awurade bɔ me ho ban fi amane mu ɛno nti, merensuro da. 2 Sɛ nnebɔneyɛfo toa me pɛ sɛ wokum me a, wohintiw, hwe ase. 3 Sɛ asraafodɔm mpo twa me ho hyia a, merensuro da; sɛ atamfo ba me so a, mede me ho bɛto Onyankopɔn so ara.